Jamelgo: waa maxay macnaheedu, maxay tahay isticmaalkeeda iyo isku macno ahaan. | Fardaha Noti
Jenny monge | | Quudinta, Fardo
Maqaalka maanta aan ka hadalno ereyga "jamelgo". Dhamaan maqaallo dhowr ah waxaan ku caddeynay oo baranay eraybixin khuseysa fardaha taasna mararka qaarkood u horseedi karta jahwareer. Waxaa jira ereyo la mid ah kan aan ka hadlayno oo qeexaya xayawaan xaalad xun ku sugan, tanina waa wax laga fogaado. In kasta oo jawiga wadajirka ah aysan ahayn in loo gudbiyo wax waxyeello leh.
Ma aragnaa waxa ereygan loola jeedo?
1 Qeexitaanka Jamelgo
2 Adeegsiga erayga
3 Jamelgo suugaanta
4 Micnaha Jamelgo
4.2 Matalón ama matalona
5 Ereyada kale ee ka imanaya dunida sinnaanta ee xiisaha kuu leh
Sida ku xusan qaamuuska Akadeemiyada Boqortooyada Isbaanishka, ereyga jamelgo waxaa loola jeedaa a faras bahalnimo u eg, muuqaal aad u caato ah oo muuqaal xun. Waxaas oo dhan waxay ka dhasheen neefka oo aan si sax ah loo quudin.
Ereyga jamelgo, wuxuu ka yimid erayga Latin ee "famelicus" oo macnahiisa aan qiyaasi karno, shaki la'aan, mahadnaq eray kale oo asal ahaan ka soo jeeda oo aan ku hayno luqadda Isbaanishka: famélico. Waa tilmaam loo adeegsado in lagu tilmaamo qof ama xaaladan oo kale xayawaan leh astaamo gaajo ah sida khafiif xad dhaaf ah
Jamelgo waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii hab quudhsan ama kalsooni badan, si caadi ah loo yaqaan, markaad ka hadlaysid sinta. Xaaladda dambe, xayawaanku maahan inuu u ekaado mid xun sida eraygu sheegayo.
Waxaan u qaadaneynaa maqaalkan inaan xasuusano muhiimada ay leedahay daryeelka xoolahayaga iyo inaysan gaarin xaaladan nafaqo daro, wax kabaxsan gaajo ama gaajo. Nafaqo darrida waxay sababi kartaa dhibaatooyin fara badan oo ku dhaca xubnaha iyo waliba awooda ee yaa u xanuunsanaya. Marka xayawaan gaajaysan ayay dhibaato kala kulmi doontaa dhaqaajinta iyo xoogsaarida.
Waa inaan ka warqabnaa taas Markaan helno xayawaan, waxay noqoneysaa masuuliyadeena waana inaan siino feejignaanta iyo daryeelka uu u baahan yahay iyadoo loo eegayo noocyadiisa, jinsiyaddiisa, waxqabadkiisa iyo duruufihiisa.
Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in wax laga ogaado cuntada iyo fiitamiinnada iyo nafaqooyinka muhiimka ah in tani ay tahay inay lahaato si xoolaheenu u helaan caafimaad wanaagsan.
Suugaanta oo dhan waxaad ka heli kartaa jilayaal lagu sharaxay labadaba erayga gaajo iyo si gaar ahba, fardo lagu qeexay ama lagu tilmaamo ereyga jamelgo. Dhamaan astaamahan waxaan ku muujineynaa oo aan tusaale siin doonaa mid caan ah: Rocinante, faraska caanka ah ee Don Quixote de la Mancha. Intaa waxaa sii dheer, magaca magaca 'equine' wuxuu ka yimaadaa ku ciyaarida erey isku mid ah nag: nag. Maaddaama Miguel de Cervantes uu sifiican isugu muujiyay qeybta soo socota ee sheekadiisa: «Wuxuu u yimid inuu ugu yeedho Rocinante, oo ah magac fikirkiisa dheer, macaan leh oo macno leh waxa uu ahaan jiray markii uu rocín ahaa, ka hor wixii uu hadda ahaa [...]«.
Rocinante, Faraska Don Quixote
Sida ereyo badan, 'jamelgo' waxay leedahay dhowr isku macno ah oo loo adeegsan karo macno la mid ahKuwaas waxaa ka mid ah, laga yaabee kuwa ugu habboon ama ugu isticmaalka badan kuwa soo socda:
Iyadoo loo tixraacayo faras yar, macnaheedu, cuqdad iyo xitaa loo tixgeliyey faras xun. Ereygan wuxuu ka yimid ereyga 'jackfruit'.
Matalón ama matalona
Caato, diif badan, oo dil ka buuxa. Dilalku waa nabarro ama waxay kaloo noqon karaan nabarro, oo ay soo saaraan is xoqitaan joogto ah iyo soo noqnoqod ama dharbaaxo. Fardaha dhexdooda waa nooca dhaawac ee ka muuqda xoqida riigga.
Waxay u gudbin kartaa dhirta, dadka ama fardaha. Laakiin diiradda saarista waxa ugu dambeeya ee na daneynaya, waxay loola jeedaa faras caato ah oo muuqaal xun leh.
Ereygan waxaa loo adeegsadaa laba macne oo ku jira dunida salka ku haysa. Dhinac in loo tixraaco shaqo fardo. Dhinaca kale, waxaa loola jeedaa fardo yaryar, oo dhererkoodu yar yahay oo loo arko inay yihiin nooc xun. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa fardo muuqaal xun leh, duug ah oo aad u sheegi karto inay wax badan soo shaqeeyeen, iyaga oo uga tagaya daciifnimo iyo oomane. Aynu xusuusano Rocinante oo aan ka hadalnay daqiiqad kahor.
Inta badan ereyadan aan aragno waxaa loo adeegsadaa jees jees iyo dhawaq amase jawi wada-hadal ah oo loola jeedo fardaha.
Ereyada kale ee ka imanaya dunida sinnaanta ee xiisaha kuu leh
hay ereyo kala duwan oo loo adeegsado sinnaanta oo siyaabo kala duwan loogu isticmaali karo iyadoo la raacayo dhaqanka afka ee aag walba. Qaar ka mid ah ereyadan ayaa horay looga hadlay boggan, sida:
Shuruudaha Waan soo qoraa oo waan rinjiyaa waxay tixraacayaan isla nooc ka mid ah jaakad dhibco leh, laakiin waxay kuxirantahay aag juquraafi ahaan mid ama ereyga kale ayaa la adeegsadaa xitaa meelaha qaarkood waxay ku kala duwanaan yar yahiin labada erey.
Waxaan kaloo ka wada hadalnay eray bixin faras, faras iyo fardo iyo waxay qeexaan.
Haddii aad xiiseyneyso ereyadan, ha ka waaban inaad aqriso qodobbada aan ka hayno sinnaanta ay tilmaamayaan.
Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay akhrinta maqaalkan sidii aan u qorayba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Jamelgo: macnaheeda iyo adeegsigiisa